bona.jonga indlu - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAlexander
Ijikelezwe yimbonakalo yentaba ebukekayo yoluhlu lweentaba zeSilvretta, indawo yethu ye see.view yeyona ndawo ifanelekileyo yokuqalisa imisebenzi yakho yasehlotyeni nasebusika eSee-Paznaun.
Indlu yethu entsha yavulwa ngoNovemba ka-2019 kwaye izolile kodwa isembindini, ifakwe kwiiAlps zaseTyrolian. Lolona khetho lulungileyo lweholide yothando ezimbini, iholide yosapho enomdla okanye ixesha elisemgangathweni kubahlobo bakho.
Baleka imiqobo yobomi bemihla ngemihla: Indawo yethu epholileyo kwi-alpine flair, exutywe nezinto zoyilo lwangoku kunye nomgangatho ophezulu, ikunika indawo eyaneleyo yokuphumla.
Ikhitshi-igumbi lokuhlala likumema kwindibano yobumnandi kwaye ixhotyiswe ngeoveni, isitovu seceramic, ifriji enendawo yesikhenkcisi, umatshini wokuhlamba izitya kunye nomatshini wekofu weNespresso obandakanya ubisi lweAeroccino. Yonwabela imbonakalo yePezinerspitze kwibhedi yakho okanye uphumle ngenkqubo ye-SkyX enezitishi zeprimiyamu, uthotho kunye ne-blockbusters kwi-TV yescreen esisicaba.
Zibuyisele kwigumbi lokulala elithe cwaka kunye nebhedi yebhokisi yasentwasahlobo, yonwabele ishawari yemvula kwigumbi lokuhlambela, sebenzisa isibuko se-LED kunye nomatshini wokuhlamba / isomisi - akukho nto kufuneka ishiywe ukuba ifuneke.
I-Wifi – i-48 Mbps
Ngenxa yendawo egqwesileyo ekunene kumda wehlathi, uhambo lwakho lweholide luqala phambi komnyango wakho: Nge-5min nje yokuhamba ufika embindini wentlambo, indawo yokutyibiliza i-skiing Bona inokufikelelwa ngeenyawo okanye ngokusebenzisa i-shuttle yasimahla. -ibhasi (isikhululo sebhasi kumgama nje oyi-100 leemitha). Ichibi lokuqubha lendawo linokufikelela kwi-2mins yokuhamba. Sicebisa ngamandla ukuba undwendwele iindawo zethu zokutyela ezidumileyo, iikhefi okanye iibhari okanye kunye nevenkile yethu yokutya (M-Preis/Spar) kufutshane nekona.
Indawo edume kwihlabathi jikelele kunye nekhethekileyo i-Ischgl inokufikelelwa ngokulula ngemoto okanye ngebhasi ye-ski simahla kwi-20mins nje.
International traveler & superhost in the beautiful alps of Tyrol.
Ifumaneka nge-imeyile, whatsapp okanye ngefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- See